किरण पौड्याल | एकदमै सामान्य व्यक्ती हुँ, जिन्दगीको उकाली ओराली सँग सम्झौता र सहयात्रा गर्न रमाइलो लाग्छ ।
यसो आफ्नो टाईमलाईन हेरेको, के-के रहेछ के-के! लौन त को-को कस्तो टुइट गर्दोरहेछ्न् भनेर विचार गरियो र हाम्रो पार्टिले यो सबैका जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्‍यो ।
[यहाँ जेसुकै लेखिएको भएता पनी, रमाईलोको लागि मात्र लेखिएको हो, कसैलाई नराम्रो लागेमा iam_kiran2003@yahoo.com मा e-mail गर्न सक्नु हुनेछ । ]
लेन्दाईले गर्ने, मकै टुइट
लोटाले गर्ने, रुन्चे टुइट
खोयाले गर्ने, खोया टुइट
बराजुले गर्ने, घण्टा टुइट
कम्पनिले गर्ने, रसिलो टुइट
कर अधिक्रितले गर्ने, खै के खै टुइट
संपोखले गर्ने, खतरानाक टुइट
समिर दिक्षितले गर्ने, मौषमी टुइट
यायावरले गर्ने, फुटबल टुइट
साँहिलादाईले गर्ने, आदमी टुइट
नारायण अमृतले गर्ने, खरो टुइट
युसफ्टले गर्ने, जानकारी टुइट
धतुरेले गर्ने, हल्ला टुइट
माईला स्याउले गर्ने, मोबाइल टुइट
पागलवस्तिले गर्ने, ताप्के टुइट
डायरिले गर्ने, लिंक टुइट
क्यासिले गर्ने, जेरी टुइट
अमृतले गर्ने, तरुनी टुइट
भंगेरोले गर्ने, चट्पट टुइट
अनन्तले गर्ने, हाईवे टुइट
काकाबाले गर्ने, उचाल्ने टुइट
सेती रिभरले गर्ने, पानी टुइट
शिकारीले गर्ने, पासो टुइट
सिग्देलले गर्ने, खाजा-नस्ता टुइट, GRE टुइट
सिलवालले गर्ने, सबिता भाभी टुइट
लालध्वजले गर्ने, ठण्डाराम टुइट
ज्योतिले गर्ने, सर्वत्र टुइट
डाइगुनरले गर्ने, औशी-पूर्णे टुइट
सिजनले गर्ने, भाँजो टुइट
ईन्द्रध्वजले गर्ने, मास्टरी टुइट
सान्दाजुले गर्ने, वाहियात टुइट
आर्योले गर्ने, गूड्बाई टुइट
जिम्मलले गर्ने, अन्धो टुइट
यात्रिले गर्ने, हावा छेकुवा टुइट
बुढो दादाले गर्ने, चेलीबेटी(?) टुइट
उमंगले गर्ने, उनको टुइट
मान्ठाले गर्ने, खोजी टुइट
मौषमले गर्ने, डाक्डरी टुइट
फन्नीले गर्ने, जेपिटी टुइट
मुसोले गर्ने, चस्के टुइट
This entry was posted in Uncategorized and tagged fun,Tweet,Twitter on फ्रेवुअरी 26, 2014 by Sandaju.
हिजो नेपालले अमेरिकासंग ९४ रनको हार ब्यहोर्नुको मुख्य कारण भनेको विपक्षी टीमलाई कमजोर ठान्नु र टस जितेर पनि अमेरिकासंगको खेलमा फिल्डिङ रोज्नु हो – मेरो विचारमा । खैर, जे भयो भयो त्यो सकियो तर त्योबाट केही पाठ सिकेर आज शसक्त ढंगले मैदानमा उत्रिनु पर्ने आवश्यकता छ ।
आजको खेल नेपालले युगान्डासंग खेल्दैछ, युगाण्डाले १९९८ मा आइसिसी प्रवेश गरेपछी २००१ मा आइसिसी ट्रफी खेलेको छ, त्यसैले हामीले तिनिहरुको वारेमा केही जानकारी लिनै पर्ने हुन्छ । कुनै पनि देशको खेलाडिको ’boutमा जानकार नभै त्यतिकै खेलको सहि लेखाजोखा गर्न मिल्दैन र सकिंदैन पनि । यहाँ मैले साथीहरुलाई एकदमै थोरै भएपनी जानकारी गराउने प्रयास गर्न लागेको हुँ, तर म ज्ञाता चै होइन । मैले यहाँ उल्लेख गरेक सबैकुरा http://www.espncricinfo.com बाट संकलन गरेको हो र त्यसैको तथ्याङ्कको आधारमा लेखेको हो ।
Uganda innings (50 overs maximum) R B 4s 6s SR
A Ziraba c TuckerbMaybury 1 1500 6.66
AS Kyobe c †AndersonbGibbons 53 11231 47.32
RG Mukasa c TuckerbTrott 15 2220 68.18
B Musoke c &bTucker51100 45.45
L Sematimba† st †AndersonbRobinson 42 8030 52.50
DK Arinaitwe* c CannbTrott 18 2520 72.00
F Nsubuga not out 51 2953 175.86
D Muhumuza c †AndersonbJones 140025.00
RG Okia not out 120050.00
Extras (b 1, lb 5, w 29) 35
Total (7 wickets; 50 overs) 222 (4.44 runs per over)
जिरबा – यि दाहिने हाते ब्याट्समेन हुन्, हिजोको खेलमा रन बनाउन नसके पनि राम्रो ओपनर मानिन्छ यिनलाई
क्योबे – यि देब्रे हाते ब्याट्समेन हुन् र निकै अनुभवी पनि, टिकेर खेल्न सक्ने क्षमता छ यिनमा, जुन क्षमता ५० ओभरको खेलमा आवश्यक हुन्छ
मुकासा – यि पनि दाहिने हाते ब्याट्समेन हुन् र बलर पनि, अनुभवी र राम्रो ब्याटिङ एभ्रेज भएका यिनी स्पिन बल भने राम्रो ड्राइभ वा डिफेन्स गर्न सक्दैनन्
सेमतिम्बा – दाहिने हाते ब्याट्समेन र राइट आर्म अफब्रेक बलिङ गर्ने यिनको ब्याटिङ एभ्रेज राम्रो छ र फस्ट क्लास क्रिकेटमा सेन्चुरी पनि हानेका छन्
यि बाहेक २ अरु गरी छ जना राम्रा ब्याट्समेन लिएर युगाण्डा मैदानमा उत्रदैछ । समग्रमा छ जना ब्याट्समेन र राम्रा ३ जना बलर छन् युगाण्डाको टिममा ।
मेरो विचारमा नेपालको ब्याटिङ पक्ष राम्रो देखिएकोले आज यदी नेपालले टस जितेमा ब्याटिङ रोजेर सकेसम्म धेरै रन् बनाउनु पर्छ, जसले गर्दा आजको जीतसंगै नेट रनरेट पनि सुधार्न सकिन्छ ।
नेपाल डिभीजन थ्रीमा कायम रहन सके त्यो नै सफलता हो भन्ने मलाई लाग्छ, अझ प्रमोट भएर टु मा पुग्नु र वर्ल्ड कपको बाटोमा लम्कनु त सुनमा सुगन्ध झै हुनेछ ।
अन्त्यमा, हामी नेपालीको अली धेरै हौसिने बानी छ, संयम भएर स्थिती र हासिल गरेको सफलतालाई सहि अंकलन गरेर सबै अघी बढौ अनी समर्थन गरौ ।
This entry was posted in Uncategorized on अप्रील 29, 2013 by Sandaju.
अहिलेको राजनैतीक अवस्थामा कहिले के हुन्छ भन्ने कुराको सटिक अनुमान लगाउन म जस्ता सामान्य नागरिक त्यस्मा पनि विदेशिएकोलाई निक्कै गार्हो हुन्छ । तर कता मेरो मनले सोचेको केही कुराहरु लेख्न गैरहेको छु । भाषागत त्रुटी त हुन्छ नै साथ साथै वैचारिक ज्ञानको कमी होला – सुझाब र सल्लाह दिनु होला ।
अब शुरु गरौ कुरो – कुरोको चुरो के भने माओवादी पार्टीको मुख्य लक्ष्य –
अहिले जे सुकै भईरहे तापनी माओवादिको अन्तिम लक्ष भनेको जनगणतन्त्र नै हो, यस्मा ऊ एकरत्ती पनि टसमस भएको छैन । वैध्यबाले पार्टी फुटाउनु भनेको समानान्तर रुपमा अर्को माओवादी पार्टी गठन गर्नु हो जुन कालान्तरमा दोस्रो तथा अन्तिम राजनैतीक पार्टीको रुपमा राख्ने प्रयास हो । भिन्न भिन्न सिद्धान्त र दर्शन बोकेका पार्टी स्विकार नगरने अथवा भनु नचाहने कुरा माओवादिले भन्दै आएको हो । समग्रमा भन्दा एउटै सिद्धान्तका दुई (आफ्नै) पार्टी बनाएर लक्ष प्राप्ती सम्म पुग्ने अर्को रणनिती हो । यसो गरेमा प्रचन्ड र बाबुराम देखी चिढिएकाहरु पनि वैधको पार्टिमा बस्ने निस्चित छ । यस्को साथ साथै वैधले अर्को पार्टी खोले पछी, प्रचन्ड पक्षको माओवादी उग्रपन्थी रहित जस्तो देखिने छ, जस्ले गर्दा कतीपय दोधारमा परेका अनी ढल्के मल्केहरुको प्रवेश त्यो पार्टिमा हुनेछ । अन्तत: नेपाली काङ्रेस्स अनी एमाले निक्कै कम्जोर अवस्थामा पुग्नेछन् । मधेशी दलहरु बलेको आगो ताप्ने प्रव्रित्ती भएकोले प्रचन्डलाई सजिलो पार्नेछन् । मेरो विचारमा आजका मिती सम्म माओवादी आफ्नो यो योजनामा सफल हुँदै गई रहेको छ । तै पनि नेपालको राजनीतिमा भारतको ठुलै भूमिका देखिने भएकोले केही कुरा त्यसमा पनि भर पर्छ, तैपनि भारतले सत्तामा जो सुकै भए पनि आफ्नो रोटी सेक्ने तिर बढी ध्यान दिने गरेको छ, त्यसकारणले भारत पनि माओवादिको कित्तामा धाप मार्न अवस्य जान्छ । यसमा माओवादी कत्तिको सफल हुन्छ त्यो भविस्यले देखाउछ ।
This entry was posted in Uncategorized on जुन 2, 2012 by Sandaju.
कुरो के भने – हिजो चट्ट सँग ब्लग लेख्न थाल्ने भने जानी नजानी टक्क शुरु गरियो । आज एसो २-४ कुरा लेखु न त भनेर टक्क किबोर्ड समाको, के लेखु के लेखु पो भो । वर्तमान परीपेक्षमा, देशको अवस्था के लेख्नु ? टुइटर र फेसबूक मै बिजोक देखिन्छ । सामजिक र एकताको कुरो गरु न त भन्दा खै के? खै के? भने जस्तो । हामीले जिउँदाको जन्ती त जान पाएनौ पाएनौ, मर्दाको मलामी पनि हुन सकेनौ । यो हफ्ता ब्रजेस खनाल, बुद्धी सागर अनी एक जना चेलीको लेख हेरियो सबै जना झन्नै मरेको, मर्न लागेको अनी मरिसकेका रहेछन् । अर्को हात्ती त (संविधान सभा) ठाउँको ठाउँ – घटना स्थलमै – स्पट डेथ भयो । यो हफ्ताको शुरुवात नै त्यसरी भयो अनी आजसम्म दिनहु त्यही भईराछ, अर्थात यो हफ्ता दु:खद रह्यो – कालको पक्षमा गयो मने मृत्‍युको हफ्ता भयो भन्ने हामीलाई लागिराछ । यस्तो परिस्थितीमा हामीले निस्चित रुपमा धैय गुमौनु हुँदैन अनी शान्त मनले निकै गमेर मात्र केही बोल्नु वा लेख्नु पर्छ भन्ने हामीले बुझीबक्सेका छौ ।
This entry was posted in Uncategorized and tagged blog,kiran,nepal,nepali,TNT on मे 31, 2012 by Sandaju.
२००८ मा मा शुरुवात गरेको थिए तर खासै केही लेख्न सकिन र अन्तत: त्यो सकियो पासवर्ड पनि बिर्सिए । अब यो मा चै पक्कै धेर थोर जे जस्तो भए पनि लेख्ने प्रयास गर्छु । आफ्नो मनमा धेरै बिषयमा लागेको कुराहरु अरुलाई भनेर मात्र हुदो रहेनछ भन्ने लागेर २-४ लाइन कोर्न को लागि यो बाटो रोजेको हुँ, हेर्दइ जाउ यस्ले कतिको निरन्तरता पाउछ ।
This entry was posted in Uncategorized on मे 30, 2012 by Sandaju.